ज्वनो खाँदा हुन्छ यी चमत्कारिक फाइदाहरु ! « Onlinetvnepal.com
ज्वनो खाँदा हुन्छ यी चमत्कारिक फाइदाहरु !
Published : 12 May, 2019 2:59 pm
ज्वनो एक फाइदाजनक र गुणकारी मसला (चिज) हो। ज्वनोलाई हामी खानपानमा बढी प्रयोग गर्ने गर्छौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्वनोका अनेक चमत्कारिक औषधीय गुणहरु छन्। ज्वनोमा क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, आयोडिन र क्यारोटिन नामक तत्व पाइन्छ। जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदाजनक छ।